Macalinka Man United Ee Jose Mourinho Oo Sheegay In Anthony Martial Uu Siin Doono Fursadii Ugu Dambeysay Kulanka FA Cup-ka Ee Wigan Athletic – WWW.Gool24.net
Macalinka Man United Ee Jose Mourinho Oo Sheegay In Anthony Martial Uu Siin Doono Fursadii Ugu Dambeysay Kulanka FA Cup-ka Ee Wigan Athletic
Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in weeraryahankiisa ree France Anthony Martial uu siin doono fursadii ugu dambeysay uu kaga soo muuqan lahaa safka kooxdiisa si uu ku soo bandhigo awoodiisa ciyaareed.
“The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Jose Mourinho uu fursan dahabi ah uu ugu talagalay Anthony Martial kulanka maanta ee FA Cup ay la ciyaari doonaan kooxda Wigan Athletic, si uu u soo bandhigo inuu u qalmo laacib kasoo muuqda safka kooxda tababare Jose Mourinho.
Dhaliyaha reer France ee Anthony Martial ayaa wuxuu soo caga dhigtay garoonka Old Trafford xili ciyaareedkii lasoo dhaafay, wuxuuna xili ciyaareedkaas u suura gashay inuu dhaliyo 17 gool, taasoo ka dhigtay inuu noqdo dhaliyihii ugu fiicnaa kooxda Unitedkan, xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay Old Trafford.
Jose Mourinho ayaa ka saaray Anthony Martial liiska kooxdiisa kulamadii lasoo dhaafay, kadib bandhigii liitay uu soo bandhigay kulankii Liverpool, taasoo si weyn uu kaga cadhooday tababaraha ree Portugal.
Dhinaca kale Anthony Martial ayaa waxaa si weyn looga xiiseenayaa qaar ka mid ah kooxaha qaarada yurub, gaar ahaan kooxda ree France ee Paris Saint – Germain. Waxaana qaab ciyaareedka xidigan si weyn ula dhacsan tababaraha PSG Unai Emery.